Bauxite bụ okwute mkpọda nke nwere nnukwu aluminium - vidiyo
Zụta bauxite eke na ụlọ ahịa anyị
Bauxite bụ okwute ụrọ nke nwere ihe dị n’ime alumini. Ọ bụ isi ala nke ụwa na sọlfọ na gallium. Bauxite mejuputara karie aluminium mineral, boehmite na diaspore, gwakọtara ya na iron ironides goethite na hematite, aluminium kaolinite nke alumite na obere ihe nke anatase na ilmenite.
Enwere atụmatụ dị iche iche maka nhazi ọkwa maka bauxite.
Vadász (1951) iche bauxites mechara (silicate) na karst bauxite ores (carbonate):
Igwe carbonate bauxites na-ewere ọnọdụ kachasị na Europe, Guyana, na Jamaica nke dị n'elu oke okwute (okwute okwute na dolomite), ebe a kpụrụ ha site na ihu igwe na-acha uhie uhie na mkpokọ ụrọ nke agbasasị agbatị - agbatị agbatị nke a na-etinyekarị anya ka ihe mgbochi nke okwute ji nwayọọ nwayọọ gbazee n'oge ihu igwe kemịkal. .
A na - ahụta okwute na - esote na obodo nke oke ala. Ewere ha site na mgbe emechara nke okwute di iche dika silite, gneiss, basalt, syenite, na shale. E jiri ya tụnyere ọla ndị bara ọgaranya, nguzobe nke okwute a na-adabere ọbụna n'ọnọdụ ihu igwe siri ike na ọnọdụ nwere ọwa mmiri dị mma. Nke a na - eme ka mgbasa nke kaolinite na ọdịda nke gibbsite. Mpaghara ndị nwere aluminom kachasị elu na-adịkarị n'okpuru ebe mkpuchi elu. Ihe ikuku hydroxide di na ntinye ego nke bekee bu nke anakpo gib Website.
N'ihe banyere Jamaica, nyocha nke ala n'oge na-adịbeghị anya gosipụtara ọkwa dị elu nke cadmium, na-atụ aro na bauxite sitere na ntinye Miocene ash na-adịbeghị anya site na ngosipụta nke mgbawa ugwu dị ukwuu na Central America.
Australia bụ ndị na-emepụta bauxite kachasị na China, ndị China na-esote ya. Na 2017, China bụ onye kachasị gosipụta aluminom na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara nke mmepụta ụwa, Russia, Canada, na India sochiri. Ọ bụ ezie na ihe ndị a chọrọ n’etiti alịm na-amụba ngwa ngwa, ihe ndị a ma ama banyere okwute ọla ya ezuola iji mezuo ihe ụwa chọrọ maka aluminom ruo ọtụtụ narị afọ. Ntughari alughari ndi ozo, nke nwere uru iwetulata onu ala eletrik n’igwe alumini, gha n’iru inye uwa nile.
Enwere ike iji okwute Bauxite na-atụgharị uche, nke a nwekwara ike inyere gị aka ịnweta azịza maka ọnọdụ ndị nwere ike ịmasị gị
O nwekwara ike nye gị ohere ịmara ebumnuche ndị ọzọ. Amara ya inye aka mee ka enwee obi uto na odi nma.
Ọ naghị arụ ọrụ ozugbo mana ọ bụrụ na edobere ya na gburugburu gị, ike ya na-arụ ọrụ iji kpalie gị n'oge.
Site n’inyere gị aka ịhapụ ihe mmetuta mmetụta uche na-egbochi gị imezu ihe ị chọrọ, ọ nwere ike inyere gị aka iwepụ mmetụta na-eme gị iwe ma ọ bụ na-ewe iwe banyere ọnọdụ nke ndụ gị.
Bauxite, si Australia